निर्वाचनको विकल्प छैन - Karobar National Economic Daily
query_builderApril 2, 2017 11:56 AM supervisor_accountकारोबार संवाददाता visibility511
सरकारले वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने घोषणा गरेको छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको तयारी तीव्र पारेको छ । तर, अझै पनि मधेसकेन्द्रित दलले आफ्ना माग सम्बोधन नभई निर्वाचनमा नजाने अडान कायमै राखेका छन् ।
मुख्यगरी मधेसकेन्द्रित दलको बढी प्रभाव रहेको प्रदेश नम्बर २ मा निर्वाचन हुने वातावरण अझै बनिसकेको छैन । पहाडका जिल्लामा चुनावका पक्षमा रहेका दलहरूले चुनावलक्षित कार्यक्रम गरिरहे पनि मधेसका जिल्लामा भने चुनावको वातावरण अझै बनिसकेको छैन ।
निर्वाचन लक्षित कार्यक्रम लिएर मधेस छिर्न ठूला दलहरू पनि ‘पर्ख र हेर’कै अवस्थामा छन् । मधेसकेन्द्रित दललाई सहमतिमा ल्याउन सरकारले प्रयास जारी राखेको छ । आइतबार (आज) मधेसी मोर्चासँग उनीहरूले उठाउँदै आएका मागको व्यवस्थापन गर्दै निर्वाचनको वातावरण बन्ने गरी सहमतिको गृहकार्यमा सरकार जुटिरहेको छ ।
तर, सहमति हुने, नहुनेमा अन्योल भने कायमै रहेको मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरू बताउँछन् । स्थानीय तहको निर्वाचन, निर्वाचनका चुनौतीहरू र राजनीतिक दलका तयारीबारे कारोबारकर्मी जगन्नाथ दुलाल र तीर्थराज बस्नेतले विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँग गरेको संक्षिप्त कुराकानी :
जनता मत दिन आतुर छन्
रामहरि खतिवडा,सांसद,नेपाली कांग्रेस
स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख ३१ गते हुने घोषणा भए पनि केही समय मिति सार्ने चर्चा पनि छ, के हुन्छ ?
सरकार दुई प्रकारका हुन्छन् । देखिने र सुनिने सरकार देशमा छ । पुष्पकमल दाहाल, गगन थापाहरू अहिले देखिने र सुनिने सरकार हुन् । रेडियोमा सुनिने र टेलिभिजनमा देखिने होइन, जनताले अनुभूति गर्न सक्ने सरकार जनताले खोजेका छन् ।
त्यो भनेको स्थानीय सरकार हो । जनताले धेरै वर्ष भयो, सुनिने र देखिने सरकार मात्र पाएको । स्थानीय तहको निर्वाचनले सरकारलाई जनताको तहमा पु¥याउनेछ । सबै अधिकार गाउँगाउँमा पुग्नेछन् । जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन स्थानीय तहको निर्वाचनले सहयोग पुग्छ । लामो संघर्षपछि देशले संविधान पाएको छ । संविधानको औचित्य पुष्टि गर्न पनि स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएकै मितिमा गर्नुपर्छ ।
कर्मचारीहरूले होइन, अब जनता आफैंले चुनेका जनप्रतिनिधिले सरकार चलाउनुपर्छ, जसले जनताका वास्तविक समस्या र स्थानीय विकास, निर्माणका कुरा बुझेका हुन्छन् । जनप्रतिनिधि जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । यसकारण निर्वाचन नगर्नु भनेको जनताको अधिकार स्थापित हुन नदिनु हो । कसैले पनि जनताको अधिकार खोस्नतर्फ लाग्नु हुँदैन । जनताको अधिकार स्थापित गर्न र गाउँमा सरकार पु-याउनका लागि पनि तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्नैपर्छ ।
मधेसकेन्द्रित दल संविधान संशोधन नभई निर्वाचनमा जान तयार देखिएका छैनन् । उनीहरूलाई समेटेर निर्वाचनमा जान के गर्नुपर्ला ?
मधेसी मोर्चाले पनि मेरो गोरुको बा¥है टक्का भन्नु हुँदैन । संविधान भनेको बाइबल, गीता होइन । आवश्यकताअनुसार संशोधन हुन सक्छ । मोर्चाले उठाएका जायज माग सम्बोधनका लागि संशोधन गर्न सकिन्छ । तर, अहिले प्रदेशको नभई स्थानीय तहको निर्वाचन हो ।
पहिला जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुप¥यो । मधेसी मोर्चाले राखेका मागबारे छलफल गर्दै जान सकिन्छ । त्यस्तै अहिले प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको दल नेकपा एमालेले पनि उग्र कुरा गरेर निर्वाचनको वातावरण भड्काउन खोजिरहेको छ ।
हिजो हामीले प्रतिगामी भनेको दललाई त सँगै सरकारमा लिएर जान सक्छौं भने हिजो लोकतन्त्रका लागि लडेका सारथिहरू मिल्न सक्नुपर्छ । कसले जित्छ–हार्छ भन्दा पनि देशले, जनताले जित्ने कुरा मुख्य हो । त्यसकारण काठमाडौंमा बसेर जितहारको भविष्यवाणी गरेर मात्र भएन । सबैले जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । यसो भयो भने निर्वाचनको वातावरण अनुकूल बन्छ ।
तपाईं ओखलढुंगाबाट निर्वाचित सांसद पनि हुनुहुन्छ । ओखलढुंगामा निर्वाचनको तयारी कस्तो हुँदै छ ?
व्यवस्थापिका संसद् बैठक चलेको दिन म काठमाडौंमा हुन्छु । अरू बेलामा जिल्लामै व्यस्त छु । गाउँगाउँमा पार्टीको कार्यक्रम भइरहेका छन् । केही दिनअघि मात्र निर्वाचनमा मत माग्नसमेत कोही नपुग्ने ककनी गाउँमा पनि म पुगेँ ।
हामी गाउँगाउँमा जनताको बीचमा जाँदा उहाँहरू मत हाल्न आतुर भएको पाएको छु । जनताका समस्या, गुनासो सुन्ने मात्र होइन त्यसको समाधान गर्न पनि हामी लागेका छौं । गाउँगाउँमा विकास निर्माणका काममा पनि कांग्रेस केन्द्रित छ ।
३१ गतेसम्मको कार्यक्रमको तालिका बनिसकेको छ । योबीचमा २५ गते संसद् बैठकका लागि काठमाडौं फर्कन्छु । अरू समय जिल्लामै चुनावी गतिविधि, जनतासँग भेटघाट र विभिन्न कार्यक्रमहरूमै व्यस्त हुन्छु ।
निर्वाचन हुनेमा आशंका कायमै छ
पशुपति चौलागाईं, सांसद, नेकपा एमाले
निर्धारित मितिमा निर्वाचन हुने कुरामा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
आशंका त कायमै छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल निर्वाचन गराउने कुरामा उत्साहित देखिनु हुन्न । उहाँ लोकतन्त्रप्रति निष्ठावान मान्छे पनि होइन र प्रतिबद्ध पनि होइन । त्यसैले लोकतन्त्र फलाउने–फुलाउनेतर्फ उहाँ लाग्न चाहनुभएको छैन ।
उहाँलाई निर्वाचन परिणाममा पनि त्यति आशा छैन । अर्को सत्तारूढ घटक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि निर्वाचन चाहनुभएको छैन । त्यसैले आशंका त छ । यद्यपि अहिले उहाँहरू निर्वाचन नगराइनहुने बाध्यात्मक अवस्थामा पुगिसक्नुभएको छ ।
निर्वाचन आयोग, सुरक्षा संयन्त्र, कर्मचारीतन्त्र सबै निर्वाचनको तयारीमा जुटिसकेका छन् । अब प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनको तयारी नगर भन्न मिल्ने अवस्था पनि छैन । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि निर्वाचनलाई नजिकबाट नियाल्न थालिसकेका छन् ।
बाध्यात्मक अवस्था भएका कारण निर्धारित मितिमा निर्वाचन गर्ने कुराबाट प्रधानमन्त्री पछि हट्ने अवस्था छैन । आशंका भए पनि निर्धारित मितिमै निर्वाचन हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
मधेसी मोर्चाले निर्वाचनको विरोध गरिरहेको छ । यदि सहमति हुन सकेन भने पनि निर्वाचन हुन सक्छ र ?
सकेसम्म मधेसी मोर्चासँग सहमतिको कोसिस गरौं । सबैको सहमतिमा निर्वाचन भयो भने राम्रो हुन्छ । तर मलाई लाग्दैन कि मोर्चासँग सहमति हुन्छ । किनकि उहाँहरूका दिनदिनै माग थपिँदै जान्छन् । उहाँहरूमा लोकतन्त्रप्रतिको इमान्दारिता पनि छैन ।
कसैको बहकावमा लागेर हिँडिरहनुभएको छ । त्यसैले सहमति नभए पनि निर्वाचन गराउन राज्यले आँट गर्नुपर्छ । मधेसमा मधेस केन्द्रित दलहरू मात्रै छैनन् । त्यहाँ कांग्रेस, एमाले र माओवादी पनि छन् ।
त्यसैले २ नम्बर प्रदेशमा पनि निर्वाचन हुन्छ । समस्या नभएका ठाउँमा अहिले निर्वाचन गर्ने हो । भएका ठाउँमा पछि पनि गर्न सकिन्छ । विगतमा पनि यस्तो भएको छ । त्यसैले राज्यले देशभर निर्वाचन गराउने कुरामा आँट गर्न जरुरी छ ।
तपाईंको दलको तयारी के छ ?
हामी स्थानीय निर्वाचनका लागि मानसिक रूपमा पूर्ण तयारीमा छौं । अहिले हामी स्थानीय तहको संरचनामा पार्टीको संगठनात्मक व्यवस्थापनको काममा लागेका छौं । आन्तरिक तयारीहरू तीव्र रूपमा भइरहेका छन् ।
उम्मेदवार छनोटको चरणमा पुगिसकेका छैनौं । पार्टी कमिटीहरूले तयारी गरिरहेका छन् । हामीले समावेशिताको कुरामा मेहनत गर्नुपर्नेछ । अहिले आन्तरिक रूपमा त्यो काम भइरहेको छ ।
निर्वाचन हुनेमा अब आशंका गर्नु हुन्न
आगामी वैशाख ३१ गते नै निर्वाचन हुनेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
वैशाख ३१ गतेका लागि तय भएको स्थानीय तहको निर्वाचन निर्धारित मितिमा हुँदैन कि भनेर आशंका अब गर्नु हुँदैन । देशभरिको माहोल हेर्दा निर्वाचन हुने देखिन्छ । निर्वाचन आयोग र सरकारको तयारी हेर्दा पनि निर्वाचन हुँदैन कि भनेर आशंका गर्ने ठाउँ छैन ।
निर्वाचनको राम्रो वातावरण बन्दै गएको छ । लामो समयपछि हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनलाई लिएर जनता पनि उत्साहित बनेका छन् । राजनीतिक दलहरूले पनि त्यहीअनुसार तयारी थालेका छन् । मतदाता जागरणको काम पनि अघि बढाएका छन् ।
योबीचमा म तराईका केही जिल्लामा घुमें । यहाँ पनि निर्वाचनको माहोल बनेको पाइयो । मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरू अहिले निर्वाचनको विरोध गरिरहेका छन् तर उनीहरूकै कार्यकर्ता पनि निर्वाचनको तयारीमा जुटिरहेका छन । निर्धारित मितिमा निर्वाचन हुँदैन कि भनेर शंका पाल्नु राम्रो हुँदैन ।
मधेसी मोर्चाले निर्वाचनको विरोध गरिरहेका छन् । निकास के देख्नुहुन्छ ?
मलाई विश्वास छ कि मधेसी मोर्चा पनि सहमतिमा आउँछ । कार्यदलले सहमतिको ड्राफ्ट बनाएको छ । त्यसैका आधारमा सहमति हुन्छ भन्ने हो । अहिले प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्दै अघि बढ्ने बेला हो ।
अहिले हामी यति शक्तिशाली स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुटेका छौं, त्यसलाई संस्थागत गर्दै बाँकी अधिकारका लागि लड्ने समय हो यो । केही शक्ति अहिले निर्वाचन हुन नदिएर संविधान कार्यान्वयन नहोस् भन्ने ढंगले अघि बढिरहेका छन् । त्यसैमा लागेर मोर्चाका नेताहरू हिँड्नुभयो भने त अर्कै कुरा हो । तर, उहाँहरू त्यसरी हिँड्नु हुन्न भन्नेमा म विश्वस्त छु । सम्भवतः चाँडै मोर्चासँग सहमति हुन्छ ।
निर्वाचनमा तपाईंको दलको तयारी के छ ?
हाम्रो पार्टीले निर्वाचनको पूर्ण रूपमा तयारी गरिरहेको छ । अहिले हामी वडा तहका उम्मेदवार छनोट गर्ने चरणमा छौं । वडा तहका पार्टी कमिटीले सम्भावित उम्मेदवारको नाम सिफारिस गरेका छन् । माथिल्लो कमिटीले उम्मेदवार टुंगो लगाएपछि हामी उम्मेदवारसहितको निर्वाचन अभियान चलाउने पक्षमा छौं ।
पार्टीका एजेन्डा लिएर निर्वाचन अभियान सञ्चालन भइरहेका छन् । गाउँमा कार्यकारी सरकार बन्ने अवस्था आएको छ । निर्वाचनको माहोल बनिसकेको छ । जनता पनि निर्वाचनका लागि मानिसक रूपमा तयार छन् । अब निर्वाचन हुँदैन कि भन्ने शंका राजनीतिक नेतृत्वले मेट्न जरुरी छ । कुनै पनि हातमा तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ ।
केही ठाउँलाई देखाएर निर्वाचन रोक्नु हुन्न
सांसद, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी वैशाख ३१ गते नै स्थानीय तह निर्वाचन हुनेमा कत्तिको विश्वस्त छ ?
सरकारले घोषणा गरेको अहिलेको निर्वाचनको मिति सार्नु हुँदैन । एकपटक निर्वाचनको मिति सर्नु भनेको निर्वाचन नै अनिश्चित हुनु हो । एकपटक मात्र पनि मिति स¥यो भने संसद् र प्रदेशको निर्वाचनको पनि प्रभावित हुन्छ । नयाँ–नयाँ मुद्दा थपिँदै जान्छन्, जसले निर्वाचन नै अनिश्चित बनाउँछ । त्यसकारण जस्तो अवस्था रहे पनि निर्धारित मितिमै निर्वाचन गर्नुपर्छ ।
मधेसमा सम्भव त्यहाँ छाडेर भए पनि अन्यत्र निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
मधेसका आठवटा जिल्लामा पनि सबैतिर त्यस्तो अवस्था छैन । अधिकांशमा निर्वाचन हुने अवस्था छ । यदि त्यति मात्र कारण हो भने पनि केही ठाउँको अवस्था देखाएर सिंगो देशकै निर्वाचन रोक्नुहुन्न ।
अलिअलि विवाद त लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा हुन्छ नै । यसअघि पनि त्यस्तो अवस्था नआएको होइन । त्यतिबेला पनि निर्वाचन त भएको थियो । मधेसी मोर्चाले उठाएका जायज माग छन् भने त्यसको सम्बोधन गर्नुपर्छ । मैले भनेकै सबै हुनुपर्छ भन्ने लोकतन्त्रमा हुँदैन । प्रजातान्त्रिक तरिकाले पनि हेरिनुपर्छ ।
निर्वाचन आयोगविरुद्ध आन्दोलित पनि हुनुहुन्छ । निर्वाचनको तयारीचाहिँ राप्रपाले कस्तो गर्दै छ ?
हामी चुनावको तयारी गरिरहेका छौं । साथै, निर्वाचन आयोगको निर्णय पनि कुरिरहेका छौं । आयोगले के गर्छ, हेरिरहेका छौं । राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र हाम्रो पार्टीको सैद्धान्तिक मान्यता हो । हाम्रो वैचारिक, सैद्धान्तिक मान्यताविपरित निर्वाचन आयोगले काम गरेको छ ।
आयोगले गरेको निर्णय मान्नु भनेको हाम्रा लागि आत्मघाती हुन जान्छ । त्यसकारण आयोगले भनेकै कुरा मानेर जान सक्ने अवस्था छैन । यसको मतलब निर्वाचनमै नजाने भन्ने पनि होइन । त्यसबारे अहिले नै भन्नु हतारो हुन जान्छ ।
निर्वाचन रामहरि खतिवडा पशुपति चौलागाईं हेमराज भण्डारी सुशीलकुमार श्रेष्ठ